बिल्कुलै बेवास्ता नगरौं: भाग्य’मानी’ले मात्र देख्ने यो दुर्लभ नाग लाई छुनुहोस आफै हराउने छ ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
जानकारी धर्मदर्शन भिडियो
April 22, 2021 AdminLeaveaComment on बिल्कुलै बेवास्ता नगरौं: भाग्य’मानी’ले मात्र देख्ने यो दुर्लभ नाग लाई छुनुहोस आफै हराउने छ ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
यो पनि हेर्नुहोस्ः भिडियो हेर्नुहोस यसरि अन्माउने बेला बेहुली यति धेरै रोइन् कि रुँदा-रुँदै हृदया’घात भएर मृ’त्यु ! विवाह कार्यक्रम सकि एपछि बेहुलीलाई अन्मा’एर विदा गर्ने बेला नवविवाहिता बेहुलीको मृ त्यु भएको दुखत खबर सार्वज:निक भएको छ । ती बेहुली विदाइका बेला अत्या’धिक रोए’का कारण उनलाई रुँ’दारुँदै हृदया’घात भएर मृ त्यु भएको विश्वास गरिएको छ ।
शुक्रबार बिहान भारतको ओडिशा राज्यको सुवर्णपुर जिल्लाको बिनिका ब्लक अन्तर्गतको जुलुन्दा गाउँमा ती नवविवाहिताको मृ’त्यु भएको ओडिशाको राजधानी भुवनेश्व’रबाट संचालित टेलिभिजन च्यानल कलिंगा टिभीले जनाएको छ । उनको मृ त्युको निश्चित कारण प्रस्ट भइसकेको छैन तर स्थानीयले वि दाइका क्रममा उनी अत्या धिक रोएका कारण उनलाई हृद’याघात भएर उनको मृ त्यु भएको विश्वास गरेका छन् । घट नापछि गाउँमा शो कको वातावरण बनेको छ।
थप समाचारः राजेश हमाललाई भेट्न किन पुगे कृष्ण कंडेल , बद्रि पंगेनी र पशुपति शर्माले के भने यसो ! कृष्ण कडेल खु’शी का साथ् राजेश हमाल लाई भेट्न गएका छन्। बागेस्वरि डान्स स्टूडियो को उ’द्घा’टन का’र्यक्रम मा राजेश हमाल ले रि’बन का’टेर यसको उ”द्घा’टन गरेका छन् भने धेरै कलाकार को उप’स्थिति मा यस का’र्यक्रम सं’चालन भएको छन्। धेरै क’लाकार हरुले आफ्नो प्र’स्तु’ति दे’खाएर रमाइलो गरेका छन्।
सचिन को बिषय लाई लिएर अहिले बजार ता’त्तिएको बेला कृष्ण कडेल मिडिया मा आएका छन्। सचिन एक दिन इन्द्रेणी मा आएर आफ्नो दु’ख सु’नाए पछि अर्को दिन मैले उसलाई स्कुल मा भ”र्ना गरिदिए। राम्रो प’ढाई भएको सचिन लाई आज कसको गीत गाउने , भोलि कसको गीत गाउने भनेर लिने रहेछन। त्यो मलाई मन नै परेको छैन। मैले मेरो छोरालाई त स्कुल लान पाएको छैन , सचिन लाई बो’डर्स गरेको छु , उसको बुबाले पैसा को लागी लाने रहेछन।
मैले आफ्नो भू’मिका नि’र्बाह गरि सकेको छु , इन्द्रेणी ले सचिन को बुबा आमालाई मिलाउने भन्ने कुरा होइन । आफ्ना जन्म दिने छोरा छोरि लाई भेटेर सचिन को आमा अहिले घर फर्केकी छिन्। एक पटक छोरा छोरि लाई भेट्ने धोको थियो सरिता को , बाग्लुङ्ग देखि एक पटक भए पनि आफ्ना सन्तान लाई भेट्छु भनि आएकी सरिता आफ्ना सन्तान लाई देखे पछि अंगालो हालेर धेरै रोईन , सचिन पनि आफ्नी आमालाई देखेर धेरै माया गरे। मेरी आमा राम्री हुनुहुन्छ , बुबाले अर्को बिहे गरेर मेरी आमा ले धेरै दु’ख दिनु भयो भनि गुनासो गरेका छन्।
पहिलो श्रीमान बाट माया नपाएर दो’स्रो बि’बाह गरेकी सरिता लाई अहिले पनि भ’गवान ले ठ’गे , दोस्रो बिबाह बाट पनि राम्रो हुन् सकेन। यति बेला सचिन भाइरल भईरहदा सचिन को क’माई खान आमा अहिले मिडिया मा भा’इरल भएको भन्ने हरुको लागि यस भिडियो बाट पनि सचिन लाई आमा ले पहिले देखि नै प्रयास गरेको देख्न सकिन्छ। भिडियो हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोलाः